आमाको दुधनै कोरोना बिरुद्धको उपचार हुन सक्ने - स्वास्थ्य - प्रकाशितः वैशाख २९, २०७७ - नारी
आमाको दुधनै कोरोना बिरुद्धको उपचार हुन सक्ने
डा. रोजिना मानन्धर
वैशाख २९, २०७७ न्यूयोर्कस्थित आइकन स्कूल अफ मेडिसिनका विज्ञहरूले हालै गरेको दावी अनुसार आमाको दुधमा शिशुलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने ठूलो सम्भावना हुन्छ । यो तथ्यांक न्यूयोर्कका रोग प्रतिरोध क्षमता विशेषज्ञ रेबेका पावेलले आफ्नो अध्ययनमा पत्ता लगाएका हुन् । यदि आमालाई कोरोना संक्रमण भएको छ भने पनि आमाको दुधले नवजात शिशुलाई संक्रमणबाट बचाउन सक्छ भनिएको छ ।
उनीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धानले आमाको दुधले कोरोना संक्रमणसंग लड्न उच्च क्षमता हुने बताएको छ । डाक्टरहरूको टोलीले यो अनुसन्धानलाइ जारी राखेका छन् । अगामी शोधद्धारा उनीहरुले आमाको दुधमा भाइरससंग लड्न सक्ने क्षमता कतिसम्म हुन्छ ? के कोरोना भाइरसको निदान आमाको दुधवाटै सम्भव छ ? भन्ने कुरा पत्ता लगाउनेछन् ।
विज्ञहरूको अनुसन्धानका आधारमा आमाको दुधमा पाइने एन्टिबडीहरू कोरोनासंग लड्न मद्दत पुऱ्याउन सक्छन । यसबारे थोरै मात्र अध्ययन भएको छ । प्रोफेसर पावेलले अध्ययनमा कोरोना पोजेटिभ महिलाबाट दूध संकलन गरेकी थिइन् । सोही दुधलाई उनको प्रयोगशालामा डाक्टरहरूको टोलीले प्रतिरोध क्षमताको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस प्रयोगशालामा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूले कोरोनासंग लड्न आमाको दुधको एन्टिबडीको क्षमताको पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । यस टोलीको अनुसन्धानको प्रारम्भिक परिणाम उत्साहजनक देखिएको छ ।
एन्टिबडीहरू शरीरमा उत्पादन हुने प्रोटीन हुन् जसले शरीरलाई बाह्य ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूसंग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । माथि उल्लेखित अध्ययनले के पत्ता लगायो भने आमाको दुधमा फ्लू जस्तो भाइरससंग लड्न सक्ने प्रतिजीवीहरू हुन्छन् । उनको टोलीले एक दुधालु महिलाको दुधको नमूना अध्ययन गरेर जानकारी दिएको हो । यो अनुसन्धानलाई अहिले अमेरिकाका विभिन्न संचारमाध्यमहरुले प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
टोलीले महिलाको दुधले १३ प्रकारका बिभिन्न फ्लू जस्ता रोगसंग लड्न सक्ने एन्टिबडीहरू पाएका थिए । आमाको दुधमा रहेको एन्टिबडीहरूलाई अमुनोग्लोब्लिन ए भनिन्छ । यो अनुसन्धानले कोभिड १९ लाई प्रतिरोध गर्न महिलाको दुधमा बलियो क्षमता रहेको बताउँछन् । यद्यपि थप अनुसन्धान जारी छ ।
कोरोनालाई हराउनुहोस आमाको दूधले
भर्खरै भारतमा नवजात शिशुमा कोरोना पोजिटिभको घटना आएको थियो । तर उक्त बच्चालाई लगातार आमाको दूध खुवाईयो । यस अवस्थामा बच्चालाई आमाको दूधको सेवनबाट प्रतिरक्षा बढेका कारण बच्चा कुनै औषधि विना निको भएको डाक्टरहरूले बताएका थिए ।
आमाको दुधमा प्रशस्त पोषण
बच्चाले ६ महिनाको उमेर नपुगुञ्जेल मात्र आमालाई स्तनपान गराउन प्रेरित गर्दछ । कतिपय आमाहरु त्यसपछि स्तनपान गराउन बन्द गर्ने प्रयासमा हुन्छन् । यदि बच्चा बिरामी छ र बिभिन्न रोगबाट संक्रमित छ अथवा संक्रमणको डर छ भने आमाले आफ्नो दूध खुवाई निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्छ । किनकी आमाको दुध बच्चाका लागी औषधी हो ।